Indlela yokugqoka kwiindawo zokuSuka
Khawucinge ngeebini zeethambo ezikhethiweyo ze-ski kunye ne-top-fit ​​fit top, eyenziwe ngeendwangu zokwenza izinto, njengenye indlela yokuphefumula eya kwi-woolen longjohns. (Ifoto esuka ku-Amazon)
Ukugqoka kwimiqolo kubalulekile kunanoma yimuphi usuku lokubanda kwe-ski. Kuphezulu kwintaba, kunokuthi kube yimimoya kwaye kubanda, kwaye kufuneka ulungele oku. Ungasoloko ususa umgca xa ilanga liphuma kwaye liqhumisa intaba, kodwa ukuba akunjalo, izalathisi ziyaqinisekiswa ukuba zigcine zifudumele. Ukugqoka kwiindawo eziphambili kubalulekile ukuba uhlale ushushu ngalo naluphi na usuku lokweqa.
Uluhlu lokuqala oluya kululeka ukuba unxibe iingubo zangaphantsi ezinde (ihembe kunye neebhulukhwe). Umdala "omdala" owenziwe ngekotoni, uboya, okanye i-flannel akuyi kukugcina ukhululekile ezintabeni. Esikhundleni saloo ndawo, ukuphefumula okungaphantsi kwamagqabi okufuduzela kude nomzimba wakho nokuphelisa loo nto ibanda kakhulu, i-clammy feelings. Izambatho zifumaneka kumadoda kunye neentlobo zabasetyhini.
Nangona kukho iinkalo ezahlukeneyo zeenkampani ezenza isiseko siseko senziwe ngokukodwa ngokushushuluza, iimpawu ezithile ezifana ne-Columbia ($), i-Hot Chillys ($$), i-Smartwool ($$), i-Underarmour ($$$), ne-CWX ($$ $$) baye baphuma kwabanye:
Columbia Base Layers
Iibhanki eziseTyhus ezitshisa
I-Smartwool Base Layers
Izixhobo eziPhantsi kweeNtshonalanga kunye neeTyes
Iimpawu zeCWX Base Layer
Iimpahla eziphakathi komgca
Isitya siyinkokhelo enkulu yokugqoka, kwaye ixhaphake, njengoko nayo ingagqalwa yedwa ngexesha lokusasa. (Ifoto esuka ku-Amazon)
Uluhlu olulandelayo luluhlu lokwinqanaba lakho, isalathisi esiqhekezayo. Kuloluhlu, unxiba nantoni na kwi-sweater, i-turtleneck, okanye i-shirt ekhuselayo eyenzelwe ukugcina ufudumele okanye ukhululekile ngaphandle kokongeza ubunzima obukhulu. Abanye abakwi-skier bakhetha ukugqoka iinqanawa, kwaye abanye abaqhwithela i-skiers bakhetha nje ama-sweatshirts njengoluhlu olukhuselayo. Naluphi na ukhethayo, qiniseka ukuba oko ugqoke kukugcina kukufudumale, njengoko olu luhlu lubalulekile ukugcina ukhululekile.
Ikhefu leFleece / Soft Shell Layer
Ngeentsuku ezigqithisileyo, abanye abaqhankqalazi bekhefu bakhetha ukugqoka uluhlu lwentsimbi phantsi kwebhokisi le-ski. Olu luhlu alufanele lube luboya. Enyanisweni, ijacket e-soft-shell iyakwenza ube nefuthe ngokufudumele kwiintsuku ezibandayo. Olu luhlu aluyimfuneko, njengoko unokufumana ufudumele kakhulu ngexesha lobushushu obubusika. Nangona kunjalo, ibhatyi yeboyi okanye i-shell shell soft will keep you warm on the days that are especially cold or windy.
Cinga ukujonga i-Columbia ($), i-North Face ($$), i-Patagonia ($$$), ne-Arcteryx ($$$$):
IJobs Face Fleece Jackets
Iipatake zeFleece Layers
I-Arcteryx Soft Shell / Iingqimba zokuQala
I-ski jacket kunye neengqayi ze-ski ziluhlu oluxabisa kakhulu, kodwa nazo zikwazo zibalulekileyo.
I-ski jacket iya kukukhusela kwizinto, kwaye unamajelo amaninzi ekhatywayo. Izambatho ezibini eziphambili zeebhatyi zijekethi kunye neebhabethi zeeblobethi. Iibhatyi ezixhasi azikukhusela kuphela umoya, iqhwa, nemvula, kodwa ziya kukugcina zifudumele kwaye zikhululekile. Iibhatyi zeShell ziyakukhusela kwizinto ezinzima, kodwa azifaki i-insulated ukuze zingakugcinisi zifudumala njengeebhatyi ezifakwe kwi-jacket.
Iingubo ze-ski nazo ziyafumaneka kwiimpawu zecolisi okanye iigloke kwaye zibalulekile ukugcina ufudumele kwaye ukhululekile. Kodwa ibhetri yakho ibhetele kukuba ukhethe ibhatyi ekhuselekileyo yemozulu : i-insulated, i-seal-seal, i-waterproof and windproof.
Ngethamsanqa, kungakhathaliseki ukuba uluhlu lwamanani akho, kukho iintlobo ezahlukeneyo zokukhetha ezikhoyo kuwe:
Iipokethi ze-Ski zamadoda aphezulu
Iinqwelo ze-Ski Women's Top
IZiyonor Lagopus izibhakabhaka ezisezintanjeni ezine-lens detachable. (Ifoto esuka ku-Amazon)
Ekugqibeleni kodwa kuncinci, izixhobo ze-ski. Izikhumba ze-Ski ziya kugcina ilanga nekhephu liphuma emehlweni akho. Uzakufuna iimpahla ze-ski ukukhusela umzimba wakho wonke. Iigoggles ziyafumaneka kwiindidi ezahlukahlukeneyo zemibala , kodwa izigulane ezinama- lens eziphuzi ziba zizinto ezihambelanayo.
Izandla zakho ziza kufuna iimitha okanye iiglavu, kwaye intloko yakho iya kufuna isitya okanye isigqoko. Isitya esifudumele okanye isigqoko sokubaluleka kubalulekile kuba ubushushu obukhulu bulahlekile ngentloko yakho.
Izinto ezili-25 eziye zalahleka ngokugqithiseleyo ekuguquleleni
I-Pacific Rim ne-Tigers Economic
Ukubhiyozela i-Guru Purnima
Amacandelo oku-4 x 100
I-Nokian iThetha kwi-WRG3 Ukuhlaziywa
Ngamana Izihloko kunye neeholide imisebenzi yeSikolo esiQala
I-Battle of Chapultepec kwimfazwe yaseMexico naseMelika
Indlela yokufaka i-Leaf Spring Spring